Izwe laseMelika linikeze iHuawei ezinye izinsuku ezingama-90 ukuthi iqhubeke nemisebenzi yayo | Kusuka kuLinux
Kusukela maphakathi nenyanga edlule uhulumeni ka I-US ivuselele ilayisense elikhethekile likaHuawei ukuze ukuthi inkampani yamaShayina qhubeka nokwenza ibhizinisi nezinkampani zase-US ngemuva kokuphela kwesikhathi sokuqala esinikeziwe.
Ngalokhu, ngemuva kokuphela kwalesi sikhathi sokuqala, wanikezwa ezinye izinsuku ezingama-90 (okuvele sekuqale ukudlula amasonto amabili) futhi yize uMongameli uDonald Trump aqale waphakamisa ukuthi akukho ukunwetshwa okunjalo okuzonikezwa, isimo besingefani, njengoba uMnyango Wezohwebo waseMelika uvumile ukuthi iHuawei iyaqhubeka nokuthenga imikhiqizo eyenziwe e-USA.
Inhloso yalesi sinqumo bekuwukunciphisa ukuphazamiseka kumakhasimende akho, eziningi zazo ezisebenzisa amanethiwekhi ezindaweni zasemakhaya zaseMelika. Ukuyekelwa kwezinsuku ezingama-90 kunike amandla umkhiqizi wemishini yezokuxhumana omkhulu kunayo yonke emhlabeni ukuxhasa amakhasimende akhona emkhakheni wezingqalasizinda ze-smartphone nezamaselula.
I-Google yephule ubudlelwane neHuawei futhi izokhawulela ukufinyelela ezinsizakalweni zayo naku-app store
"Ilayisensi ejwayelekile yesikhashana inika opharetha isikhathi sokwenza amanye amalungiselelo nomnyango isikhala sokunquma izinyathelo ezifanele zesikhathi eside zabanikezeli bezokuxhumana ngezingcingo baseMelika nabangaphandle manje abathembele kwimishini yeHuawei ukwenza imisebenzi yabo ebalulekile." . Ngamafuphi, le layisensi izovumela abasebenzisi beselula ye-Huawei nabasebenzisi benethiwekhi ye-broadband yasemakhaya ukuthi baqhubeke nebhizinisi labo.
Izwe laseMelika linikeza iHuawei ezinye izinsuku ezingama-90 "yelayisensi ejwayelekile yesikhashana" yokuthenga kubaphakeli base-US.
Isinqumo senziwe ngemuva nje kwengxoxo yocingo phakathi umongameli waseMelika Donald Trump y umongameli waseChina Xi Jinping Futhi kwakungoNobhala Wezohwebo wase-United States, uWilbur Ross.
URoss uthe ukunwetshwa kwakamuva kuhloswe ngakho ukuvimbela ukuphazamiseka kwebhizinisi kulawa makhasimende akwaHuawei.
Kumele futhi kuqashelwe ukuthi lesi sandiso sihambisana nokwandiswa kohlu lwezinkampani ezihambisana neHuawei (Izinkampani ezingaphezulu kwe-46) zengeze uMnyango Wezohwebo wase-US 'uhlu lwamabhizinisi', kwaletha inani eliphelele ezingxenyeni ezingaphezu kwe-100 zeHuawei ezimbozwe yile mikhawulo.
Esitatimendeni ngokwelulwa kwesikhashana, uHuawei uthe isinqumo sikahulumeni waseMelika "asikushintshi ukuthi uHuawei uphathwe ngendlela engafanele."
Isinqumo ngeke sibe nomthelela omkhulu ebhizinisini likaHuawei
“UHuawei uphinde wasiphikisa isinqumo sokwengeza ezinye izinkampani ezingaphansi kuka-46 ohlwini lwamabhizinisi. "Kuyacaca ukuthi lesi sinqumo, esithathwe ngawo lo mzuzu, sigqugquzelwa ukucatshangelwa kwezepolitiki futhi asihlangene nakancane nokuphepha kwezwe,"
UMongameli Trump naye ubengahambisani nesinqumo eseluliwe.Njengoba kungeke kwandiswe futhi wathi okuzokwenzeka kuzoba "okuphambene" nalokhu okubikiwe. "Empeleni, sikhululekile ukuthi singenzi ibhizinisi nabo," kusho uTrump.
IHuawei ibanjwe empini enkulu yezohwebo phakathi kwe-United States neChina. Yize la mazwe ebophezele omunye komunye, izikhulu zezokuphepha zaseMelika zixwayise ngokuthi inkampani yezokuxhumana izogcina ubuhlobo bayo nohulumeni waseChina nokuthi lokhu kungaba yingozi kwezokuphepha kweMelika.
Bathi ama-smartphones akwaHuawei nemishini yenethiwekhi ingasetshenziswa yiChina ukuhlola abantu baseMelika. Kepha inkampani yaseChina ihlale iziphika lezi zinsolo.
Ngemuva kokuthi uMongameli uTrump esayine i-oda ephezulu ngoMeyi, ehlukanisa iHuawei nomphakathi wamabhizinisi e-United States kanye nalawa mazwe ahlangene, izinkampani eziningana, ezibandakanya iGoogle, iMicrosoft, i-ARM, ne-Infineon, zaqala ukumisa wonke amabhizinisi nale nkampani.
Lesi sandiso sesibili sizoqhubeka kuze kube nguNovemba 18 futhi yiyona evuselela isivumelwano esigcina amandla enkampani yaseChina ukugcina amanethiwekhi asekhona ezokuxhumana nokuhlinzeka ngezibuyekezo zesoftware kumafoni weHuawei.
Ekugcineni, izindaba ezikulolu daba zizoqhubeka zinikezwe kuze kube kutholwa inhlangano ethile, noma ngabe i-US ekugcineni ibeka i-veto yezohwebo noma i-Huawei igcina ngokuvumela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-United States inikeze iHuawei ezinye izinsuku ezingama-90 ukuthi iqhubeke nemisebenzi yayo
Uhlobo olusha lwe-Android 10 seluqalisiwe futhi lezi yizindaba zalo